महानगरको आइसोलेसन निर्माण अन्तिम चरणमा | चितवन पोष्ट दैनिक
महानगरको आइसोलेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले वडा नं.२ को वागेश्वरीस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयमा करिब एकसय शैय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्दैछ। ६ वटा घर लिएर आइसोलेसन बनाउने योजनाअनुसार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरले जनाएको छ।
वडा नं. २ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठका अनुसार एउटा घरमा पाँचवटा कोठा छन्, एउटा कोठामा तीनजना बस्न मिल्छ। उक्त आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर पनि लक्षण नदेखिएकाहरूलाई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गरिने छ।
यही ठाउँमा भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १ र २ ले एउटा घर लिएर क्वारेन्टाइन बनाएको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यहाँबाट करिब एकसयय जनाले १४ दिने क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेर घर गएका छन्। तर, क्वारेन्टाइनमा बसेका कसैलाई पनि संक्रमण नदेखिएको उनले बताए।
‘अहिलेसम्म यहाँको क्वारेन्टाइन सुरक्षित नै रह्यो,’ उनले भने, ‘होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमा संक्रमण देखिए पनि यहाँको पब्लिक क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमा संक्रमण देखिएन। यो खुसीको कुरा हो। अहिले यही ठाउँको अन्य घर पनि लिएर आइसोलेसन बनाइँदैछ।’
गतसातादेखि तयारी थालेको महानगरले केहीदिनभित्रै आइसोलेसन सञ्चालन गर्नेछ। महानगरले विपद् व्यवस्थापन समितिबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने र उपचारको जिम्मा चिकित्सालयलाई नै दिने गरी काम गर्न लागेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए।
‘चिकित्सालयले नै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्छ,’ उनले भने, ‘खर्चको व्यवस्थापन विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्छ।’